Ugboro atọ nke Blog gị na ndị ọbịa dị mkpa | Martech Zone
Bob Burchfield abụwo enyi ogologo oge na otu n'ime ụmụ nwoke kachasị mma ebe a na Indianapolis. Ọ na-abịa na ihe omume mpaghara niile ma nwee ihe zuru oke Kalenda ihe omume Indianapolis na mpaghara na AroundIndy.com. Bob tụbara m akwụkwọ a taa:
Achọrọ m ịkọrọ gị gbasara otu obere ọrụ ịde blọgụ nke enwetara n'ọnwa gara aga. Otu n'ime ógbè CVB (mgbakọ na ndị ọbịa), jụọ ha ma ha nwere ike ide blọọgụ ọbịa nke m. Blog AroundIndy.com. M bipụtara ya kwa ụbọchị (ma emesịa kwa izu) kemgbe 2008, mana anaghị eji ya maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ndepụta 10 kachasị elu nke ihe ị ga-eme na Indianapolis maka izu na-abịanụ. Ya mere, mgbe m nwetara arịrịọ a, echere m, gịnị ma ị mepee ya na mpaghara CVB niile na mpaghara mpaghara? N’ihi ya ezigara m ihe dị ka otu narị n’ime ha akwụkwọ ozi site na e-mail. Isiokwu ndị ahụ malitere ịbata abali. Amalitere m ibipụta otu ụbọchị, kwa ụtụtụ n’elekere isii nke ụtụtụ, na Mee 100.
Ọfọn ……… ..
Maka izu nke Mee 16-22, okporo ụzọ na blog dị elu 77.5% si izu gara aga. Maka izu nke Mee 23-29, okporo ụzọ dị TRIPLE izu gara aga. Okporo ụzọ na May 2011 bụ 128.6% dị elu karịa May 2010. May 30 ọbịa blog setịpụrụ a ndekọ okporo ụzọ saịtị otu ụbọchị, elu 79.1% site na mbu otu ubochi gara aga.
Ihe kachasị amasị m bụ na ọ bụrụ na m were ahịrịokwu nke ọ bụla na blọọgụ ọ bụla wee mee ọchụchọ Google, ọ na-egosi na ibe mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ Google n'ime otu awa nke ezitere m.
Mmụọ maka mbọ a sitere n'ịgụ akwụkwọ Gingde blọgụ maka Dummies. Yabụ m na ede ihe iji sị "daalụ" maka enyemaka, ndụmọdụ, nkwado na ezigbo ozi ị kesara (ya na ụmụ akwụkwọ m) kemgbe anyị zutere Southside Smoosiers (a ka na-agụ m nzukọ ndị ahụ na Egwuregwu Bean).
Bob Burchfield, Onye nchịkọta akụkọ
Daalụ Bob maka iwepụta oge iji dee m. Nke a bụ ihe mere anyị ji dee akwụkwọ ahụ! Anyị chọrọ ka ndị mmadụ tolite ikike na mkpa ha na ntanetị yana atụmatụ nwere ike ị nweta. Kindsdị ozi ịntanetị ndị a bụ ndị na-amụmụ ọnụ ọchị na ume m!
Achọrọ m ịgụ akwụkwọ gị! Adị m ọhụrụ ịde blọgụ ma chọọ enyemaka niile m ga - enweta!
Hụ na ị debanyere aha maka akwụkwọ akụkọ anyị. Anyị na-ekekọrịta ndụmọdụ kwa izu!
Achọrọ m ịgụ akwụkwọ gị! Adị m ọhụrụ ịde blọgụ.
Echere m na m kwesịrị ịgụ ya ọzọ.
Jun 2, 2011 na 12:38 AM
Valerie, ị bụ ezigbo akara!